ဖတ်လို ကိုရီးယား ချက် ချီချေဝါ ဂါ ဂျာမန် စရာနန်တွန်ဂို စလိုဗက် စလိုဗေးနီးယား စီပီဒိုင် ဆက်ဆွာနာ ဆီလိုဇီ ဆွာဟီလီ တဆောန်ဂါ တရုတ် ကန်တုံ (ခေတ်သုံး) တရုတ် ကန်တုံ (ရှေးသုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ခေတ်သုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ရှေးသုံး) တူရကီ ဒတ်ချ် ဒိန်းမတ် ပိုလန် ပေါ်တူဂီ (ဘရာဇီး) ဘိုင်ကိုးလ် ဘူလ်ဂေးရီးယား မာလဂက်စီ မာလာယာလမ် မီဇိုး မူအာရေး မြန်မာ ယူကရိန်း ရိုမေးနီးယား ရှိုနာ လစ်သူယေးနီးယား ဟန်ဂေရီ ဟီလီဂေနွန် အင်္ဂလိပ် အစ်ဘို အာမေးနီးယား (အနောက်) အီတလီ အေးဝေး
မြောက်မြားလှသော ကျွန်ုပ်တို့၏လူသားအပေါင်းအဖော်တို့သည် အစာခေါင်းပါးမှု၊ နာမကျန်းဖြစ်မှု၊ ဆင်းရဲခက်ခဲမှု၊ အကြမ်းဖက်မှု၊ ပြည်တွင်းစစ်နှင့် သဘာဝဘေးဒဏ်များကို ရင်ဆိုင်နေရသောကြောင့် ယခင်ကထက်ပို၍ ကြင်နာသနားခြင်း အလွန်လိုအပ်လျက်ရှိသည်။ ကြင်နာသနားခြင်းသည် အခြားသူခံစားနေရသောဆင်းရဲဝေဒနာ သို့မဟုတ် ဘေးဆိုးကို စာနာမှုရှိရှိသိမှတ်ပေးခြင်းနှင့်အတူ ယင်းကို လျော့နည်းပေးစေလိုသည့်ဆန္ဒတင်ပြခြင်းဟု ဆိုလိုသည်။ ထွန်းတောက်သောနေမင်း၏ နွေးထွေးသောရောင်ခြည်ကဲ့သို့ ကြင်နာသနားခြင်းသည်လည်း စိတ်ဆင်းရဲသူကို သက်သာစေ၊ ဝေဒနာကို လျော့နည်းစေ၊ စိတ်ဓာတ်ကျသူကို စိတ်ဓာတ်ရေး ခွန်အားရှိစေနိုင်သည်။
အခြားသူတို့ကို ဂရုစိုက်ပေးခြင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ကိုလိုအပ်နေချိန်တွင် သူတို့အနား၌ရှိနေခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြောအဆိုလုပ်ရပ်များနှင့် ကြင်နာသနားခြင်းကို တင်ပြနိုင်သည်။ ကြင်နာသနားခြင်းကို မိသားစု၊ မိတ်ဆွေများနှင့် အပေါင်းအသင်းများအတွင်း၌သာ ကန့်သတ်မထားခြင်းသည် ကောင်း၏။ ကျွန်ုပ်တို့မသိသူတို့ကိုပင် ပါဝင်ရန် ကျယ်ဝန်းစေနိုင်သည်။ “သင်တို့ကိုချစ်သောသူတို့အားသာ ချစ်တုံ့ပြုလျှင် သင်တို့၌အဘယ်အကျိုးရှိသနည်း” ဟုတောင်ပေါ်တရားတော်တွင် ယေရှုခရစ်မေးတော်မူခဲ့သည်။ ကြင်နာသနားတတ်သော ဤပုဂ္ဂိုလ်က ဤသို့လည်းမိန့်ဆိုသေး၏– ‘ထို့ကြောင့် သင်တို့သည် ကိုယ်၌သူတစ်ပါးပြုစေလိုသမျှအတိုင်း သူတစ်ပါး၌ပြုကြလော့။’—⁠မဿဲ ၅:၄၆၊ သမ္မာ၊ ၄၇; ၇:၁၂။
ရွှေပညတ်ဟုသိရသော ဤစကားများကို သန့်ရှင်းသောသမ္မာကျမ်းစာတွင် သင်ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာသည် ကြင်နာသနားခြင်းတင်ပြရာတွင် အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ဖြစ်ကြောင်း လူအများသဘောတူကြသည်။ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပါစေ မိမိကိုယ်ကိုမထောက်မနိုင်သူတို့ကို ကူညီပေးရန်ဟူသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်ကို ကျမ်းစာက ကြိမ်ဖန်များစွာဖော်ပြသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ယင်း၏အာဘော်ရှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖန်ဆင်းရှင် ယေဟောဝါဘုရားသခင်ကို ကြင်နာသနားခြင်းတင်ပြရာတွင် အကောင်းဆုံးစံနမူနာရှင်အဖြစ် ဖော်ပြထားသည်။
ဥပမာ၊ ကျွန်ုပ်တို့ ဤသို့ဖတ်ရ၏– “မိဘမရှိသောသူငယ်၊ မုဆိုးမဘက်၌တရားစီရင်၍ ဧည့်သည်အာဂန္တုတို့ကိုစုံမက်သဖြင့် အဝတ်အစားတို့ကို ပေးသနားသော [ဘုရားသခင်] ဖြစ်တော်မူ၏။” (တရားဟောရာ ၁၀:၁၈) ယေဟောဝါဘုရားသခင်ကို ‘ညှဉ်းဆဲခြင်းကိုခံရသောသူတို့အား တရားပြုတော်မူ၏။ ငတ်မွတ်သောသူတို့ကို ကျွေးမွေးတော်မူသောအရှင်’ အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ (ဆာလံ ၁၄၆:၇) တိုင်းတစ်ပါးမှလာရောက်နေထိုင်သော အခွင့်မသာသူတို့နှင့်ပတ်သက်၍ ယေဟောဝါဤသို့မိန့်ဆို၏– “သင်နှင့်အတူနေသောဧည့်သည်ကို ကိုယ်အမျိုးသားချင်းကဲ့သို့မှတ်ရမည်။ ကိုယ်နှင့်အမျှချစ်ရမည်။”—⁠ဝတ်ပြုရာ ၁၉:၃၄။
သို့သော် ကြင်နာသနားခြင်းတင်ပြရန် အမြဲမလွယ်ကူပါ။ ကောလောသဲမြို့ရှိခရစ်ယာန်များထံ တမန်တော်ပေါလုဤသို့စာရေးခဲ့သည်– “သင်တို့သည် လူဟောင်း၏အကျင့်တို့နှင့် လူဟောင်း၏ကိုယ်ကိုချွတ်ပယ်၍၊ ဖန်ဆင်းတော်မူသောသူ၏ပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အညီ၊ မှန်သောပညာအားဖြင့် အသစ်ပြုပြင်သောလူသစ်ကို ယူတင် ဝတ်ဆောင်သောသူဖြစ်ကြ၏။ . . . သင်တို့သည် ဘုရားသခင်ရွေးကောက်သောသူ၊ သန့်ရှင်းသောသူ၊ ချစ်အပ်သောသူကဲ့သို့ သနားစုံမက်ခြင်း . . . ကို ယူတင်ဝတ်ဆောင်ကြလော့။”—⁠ကောလောသဲ ၃:၉၊ ၁၀၊ ၁၂။
ထို့ကြောင့် ကြင်နာသနားသည့်သဘောထားမွေးမြူရာတွင် ကြိုးစားအားထုတ်မှုလို၏။ ယင်းသဘောထားသည် ခရစ်ယာန်များယူတင်ဝတ်ဆောင်ရန်မျှော်လင့်ထားသည့် “လူသစ်” ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ပေါလုသည် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော ရှေးရောမလူ့ဘောင်တွင် အသက်ရှင်ခဲ့သည်။ သူသည် မိမိ၏ယုံကြည်သူချင်းများကို ပို၍စာနာတတ်သူ၊ ပို၍ကြင်နာသနားတတ်သူများဖြစ်လာကြပြီး သူတို့၏ဥပဓိရုပ်သွင်ကို သိသိသာသာပြောင်းလဲကြရန် အားပေးခဲ့သည်။
အချို့က ကြင်နာသနားခြင်းတင်ပြသူတို့ကို ပျော့ညံ့သူနှင့် အားနွဲ့သူအဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။ ထိုသို့ရှုမြင်ခြင်းသည် မှန်ကန်ပါသလော။
လုံးဝမမှန်ပါ! စစ်မှန်သောကြင်နာသနားခြင်းတင်ပြမှု၏နောက်ကွယ်ရှိ လှုံ့ဆော်ပေးသောတွန်းအားမှာ ဘုရားသခင်၏ဥပဓိရုပ်တော်ဖြစ်သည့် နက်ရှိုင်းသောမေတ္တာဖြစ်၏။ “ဘုရားသခင်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဖြစ်တော်မူ၏။” (၁ ယောဟန် ၄:၁၆) ယေဟောဝါကို “သနားကြင်နာတတ်သည့်အဘ၊ နှစ်သိမ့်ခြင်းရှိသမျှတို့၏ ဘုရားသခင်” ဟုမှန်ကန်စွာခေါ်ဆိုခဲ့သည်။ (၂ ကောရိန္သု ၁:၃၊ ကဘ) “သနားကြင်နာ” ဟူ၍ပြန်ဆိုသည့်အသုံးအနှုန်းသည် မူရင်းစာသားတွင် “သနားခြင်း၊ ဖျားနာနေသူတို့ကို စာနာတတ်ခြင်း” ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည်။ သို့ဖြစ်သောကြောင့် ယေဟောဝါသည် ‘ကျေးဇူးမသိသောသူ၊ ဆိုးညစ်သောသဘောရှိသောသူတို့အား သနားခြင်းစိတ်ရှိတော်မူ၏။’—⁠လုကာ ၆:၃၆။
ကျွန်ုပ်တို့ကိုလည်း စာနာရိုင်းပင်းမှုကဲ့သို့သော သနားကြင်နာမှုပါသောအရည်အသွေးများ တင်ပြရန် ဖန်ဆင်းရှင်တောင်းဆိုထားသည်။ မိက္ခာ ၆:၈ တွင် ဤသို့ဖတ်ရသည်– ‘အချင်းလူ ကောင်းသောလမ်းကိုပြတော်မူပြီ။ တရားသဖြင့်ပြုခြင်း၊ ချစ်ခင်ကြင်နာမှုကိုနှစ်သက်ခြင်း၊ သင်၏ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ နှိမ့်ချသောစိတ်နှင့်ကျင့်နေခြင်းမှတစ်ပါး အဘယ်ပူဇော်ရာယဇ်ကို ထာဝရဘုရားသခင်တောင်းတော်မူသနည်း။’ နယပုံပြင် ၁၉:၂၂ [ကဘ] တွင် ဤသို့ဖတ်ရသည်– “လူ၏နှစ်လို့ဖွယ်ရာကား သူ၏ချစ်ခင်ကြင်နာမှုပြခြင်းတည်း။” မိမိခမည်းတော်၏ဥပဓိရုပ်တော်ကို စုံလင်စွာရောင်ပြန်ဟပ်သူ ဘုရားသခင့်သားတော် ယေရှုခရစ်က နောက်တော်လိုက်များအား ဤသို့ပင်တိုက်တွန်းခဲ့သည်– “ထို့ကြောင့် သင်တို့အဘသည် သနားခြင်းစိတ်ရှိတော်မူသည်နည်းတူ သင်တို့သည်လည်း သနားခြင်းစိတ်ရှိကြလော့။” (လုကာ ၆:၃၆) ဤအားပေးတိုက်တွန်းမှုကို ဂျေရုရှလင်သမ္မာကျမ်းစာက ဤသို့ပြန်ဆို၏– “သင်တို့ခမည်းတော်သည် ကြင်နာသနားခြင်းရှိသည့်နည်းတူ သင်တို့လည်း ကြင်နာသနားခြင်းရှိကြလော့။”
ကြင်နာသနားခြင်းက ကြွယ်ဝသောဆုကျေးဇူးများပေးနိုင်သောကြောင့် ထိုသို့တင်ပြရန် အကြောင်းကောင်းရှိသည်။ နယပုံပြင် ၁၁:၁၇ တွင်ဤရေးသားထားသည့်မှန်ကန်မှုကို မကြာခဏတွေ့မြင်ရ၏– “သနားတတ်သောသူသည် မိမိကိုယ်၌ ကျေးဇူးပြုတတ်၏။” လိုအပ်နေသူတစ်ဦးကို ကျွန်ုပ်တို့သနားကြင်နာမှုတင်ပြသည့်အခါ ဘုရားသခင်က ယင်းကို ကိုယ်တော့်အပေါ် ကျေးဇူးပြုသည်ဟုယူမှတ်တော်မူ၏။ ကိုယ်တော်သည် မိမိ၏ဝတ်ပြုကိုးကွယ်သူတို့တင်ပြသော ကြင်နာသနားခြင်းမှန်သမျှအတွက် ချစ်ခင်ကြင်နာမှု ပြန်ဆပ်ပေးရန် တာဝန်ယူတော်မူသည်။ ဘုရားသခင်သည် ဘုရင်ရှောလမုန်ကို ဤသို့ရေးသားစေခဲ့သည်– ‘ဆင်းရဲသားကိုသနားသောသူသည် ထာဝရဘုရားသခင်အားချေးငှားသောသူဖြစ်၍ သူပြုသောအမှု၏အကျိုးကို ဆပ်ပေးတော်မူလိမ့်မည်။’ (သု. ၁၉:၁၇) ထို့ပြင် ပေါလုဤသို့ရေးခဲ့သည်– “ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူမည်သည်ကား . . . သခင်ဘုရား၏လက်တော်မှ အကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်ဟု သိမှတ်ကြလော့။”—⁠ဧဖက် ၆:⁠၈။
ကြင်နာသနားခြင်းသည် ငြိမ်သက်ခြင်းကို ဆက်တည်မြဲစေနိုင်ပြီး သဘောထားကွဲလွဲမှု လျော့နည်းရန် ကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်သည်။ သနားကြင်နာခြင်းက နားလည်လွဲမှုများကို ကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်ပြီး ခွင့်လွှတ်မှုအတွက် လမ်းဖွင့်ပေး၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏အယူအဆများ သို့မဟုတ် ခံစားချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြလိုသည့်အတိုင်း အမြဲမဖော်ပြရသောကြောင့်၊ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရပ်များကို လွဲမှားစွာအဓိပ္ပာယ်ကောက်နိုင်သောကြောင့် နားလည်လွဲမှုများ ဖြစ်လာပေမည်။ ထိုသို့သောအခြေအနေတွင် ကြင်နာသနားမှုက ပြဿနာကို ကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်ပြီး ငြိမ်သက်မှုကို ဆက်ရှိစေ၏။ ကြင်နာသနားတတ်သူအဖြစ် လူသိများသော လူတစ်ယောက်ကို ခွင့်လွှတ်ရန် လွယ်ကူသည်။ ကြင်နာသနားမှုက ခရစ်ယာန်များအတွက်ပေးသော ပေါလု၏ဤအကြံပေးချက်အတိုင်း နေထိုင်ရန် ထောက်ကူပေး၏– “တစ်ယောက်၌တစ်ယောက် အပြစ်တင်စရာအခွင့်ရှိလျှင် အချင်းချင်းသည်းခံ၍ အပြစ်ကိုလွှတ်ကြလော့။”—⁠ကောလောသဲ ၃:၁၃။
ထို့ပြင် ကြင်နာသနားခြင်းသည် ဆင်းရဲဝေဒနာကို သက်သာစေနိုင်စွမ်းလည်းရှိ၏။ ကျွန်ုပ်တို့သိခဲ့ပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်း ပူပင်သောကရောက်နေသူတို့အပေါ် စာနာစိတ်တင်ပြပြီး ဆင်းရဲဝေဒနာခံစားသူတို့နှင့်အတူ မျှဝေခံစားစေ၏။ ကြင်နာသနားခြင်းတွင် စိတ်ဆင်းရဲသူတို့အပေါ် သနားခြင်းနှင့် ထိုသို့သောသူတို့ကို လက်တွေ့ကူညီပေးခြင်းပါဝင်သည်။
စာနာခြင်းအားဖြင့် ခရစ်ယာန်များ ယေရှုကို တုပကြသည်။ ကိုယ်တော်သည် အခြားသူတို့ကို ကာယရေးနှင့် ဘုရားသခင်နှင့်ရင်းနှီးလာစေရေး နှစ်မျိုးစလုံးတွင် အကူအညီမပေးနိုင်လောက်သည့်အထိ အလုပ်မများလွန်းခဲ့ပေ။ အခြားသူတို့ အကူအညီလိုအပ်လျက်ရှိသည်ကို သိမြင်တော်မူသောအခါ ကူညီနိုင်သည့်နည်းလမ်းကို ကြင်နာသနားစွာဖြင့် ကိုယ်တော်မြင်တွေ့တော်မူခဲ့သည်။
ဝတ်ပြုရေးကိစ္စများတွင် အကူအညီပေးရသူများ၏လျစ်လျူရှုမှုကိုခံနေရသူတို့ကို ယေရှုတွေ့မြင်တော်မူသောအခါ ကိုယ်တော်၏တုံ့ပြန်ပုံကို သုံးသပ်ကြည့်ပါ။ ဤသို့ဖတ်ရ၏– “လူအုပ်ကို မြင်သော် သနားတော်မူ၏။ အကြောင်းမူကား သူတို့သည် အရေဆုတ်ခြင်း၊ ပစ်ထားခြင်းခံရသည့် ထိန်းသူမဲ့ သိုးများကဲ့သို့ ဖြစ်ကြ၍တည်း။” (မဿဲ ၉:၃၆၊ ကဘ) “သနားတော်မူ” ဟုပြန်ဆိုထားသောစကားလုံးနှင့်ပတ်သက်၍ ကျမ်းပညာရှင်တစ်ဦးက ယင်းစကားလုံးသည် “လူတစ်ဦးအား လှုံ့ဆော်ပေးသည့် သူ၏အတွင်းကျဆုံးသောအပိုင်းမှ ခံစားချက်” ဟူ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိကြောင်း ပြောဆိုသည်။ အမှန်တွင် ဤစကားလုံးသည် ဂရိဘာသာစကားတွင် ထောက်ထားကြင်နာသည့်ခံစားချက်အတွက် ပြင်းထန်ထိရောက်မှုအရှိဆုံးသော ဝေါဟာရများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။
ထိုနည်းထပ်တူပင် ထောက်ထားကြင်နာမှုရှိသောခရစ်ယာန်များသည် အခြားသူတို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဘုရားသခင်နှင့်သူတို့၏ဆက်ဆံရေးပိုင်းဆိုင်ရာတို့ကို ကူညီပေးရန် ချက်ချင်းကြိုးစားကြသည်။ တမန်တော်ပေတရု ဤသို့ရေးခဲ့သည်– ‘သင်တို့သည် တစ်စိတ်တစ်ဝမ်းတည်းရှိကြလော့။ စာနာထောက်ထား၍တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ညီရင်းအစ်ကိုကဲ့သို့ချစ်ကြလော့။ ကြင်နာသနားတတ်သောသဘော ရှိကြလော့။’ (၁ ပေတရု ၃:၈၊ ခမ) ဥပမာ၊ ချို့တဲ့သောခရစ်ယာန်မိသားစုတစ်စုသည် သူတို့၏ကျန်းမာရေးပြဿနာများကြောင့် ဒေသသစ်တစ်ခုသို့ ပြောင်းရွှေ့လာသောအခါ ထိုဒေသရှိယုံကြည်သူချင်းများက ခြောက်လအတွက် အခမဲ့အိမ်ငှားပေးခဲ့သည်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဤသို့ပြန်ပြောပြသည်– “ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အခြေအနေကိုသိဖို့ သူတို့နေ့တိုင်းလာပြီးမေးမြန်းကြတယ်၊ သူတို့ရဲ့အားပေးစကားတွေက ကျွန်တော်တို့ကို သက်သောင့်သက်သာရှိစေတယ်။”
ခရစ်ယာန်စစ်များသည် သူစိမ်းများ၏လိုအပ်ရာများကိုလည်း အရေးထားကြသည်။ သူတို့မသိသောသူတို့ကိုပင် ကူညီပေးရန် မိမိတို့၏အချိန်၊ ခွန်အားနှင့် ပစ္စည်းဥစ္စာများကို ဝမ်းသာစွာပေးဆက်ကြသည်။ ပထမဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြခဲ့သော သူစိမ်းသက်သက်ကို ကူညီပေးခဲ့ကြသည့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများမှာ ယေဟောဝါသက်သေများဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ခရစ်ယာန်အသင်းတော်သည် ကြင်နာသနားခြင်းနှင့် မေတ္တာစာနာမှုတို့ဖြင့် လွှမ်းနေသောဝန်းကျင်ပင်ဖြစ်သည်။ မေတ္တာ၏လှုံ့ဆော်မှုကြောင့် အသင်းသားများသည် ကူညီနိုင်သည့်နည်းလမ်းများ ရှာတွေ့ရန် ကြိုးစားကြသည်။ အသင်းတော်ရှိမိဘမဲ့များနှင့် မုဆိုးမများသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပြဿနာအမျိုးမျိုးကြောင့် သင်၏စိုးရိမ်ပေးမှုနှင့် စာနာမှုတို့ကို လိုအပ်ပေမည်။ ဆင်းရဲချို့တဲ့ခြင်း၊ ဆေးဝါးလုံလုံလောက်လောက်မရှိခြင်း၊ အိုးအိမ်လုံလောက်မှုမရှိခြင်း သို့မဟုတ် အခြားကိုယ်ရေးကိုယ်တာအခက်အခဲများ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရန် ထိုသူတို့ကို သင်ကူညီပေးနိုင်သလော။
ဂရိနိုင်ငံရှိ ဇနီးမောင်နှံတစ်စုံကို သုံးသပ်ကြည့်ပါ။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူသည် ရုတ်တရက်လေဖြတ်သွား၏။ သူနှင့်သူ့ဇနီးတို့သည် မိုင်နှင့်ချီဝေးသောနေရာတွင် ဆေးရုံသွားတက်ခဲ့ရသည်။ သို့သော် သူတို့၏နည်းပါးသောဝင်ငွေမှာ လိမ္မော်ခြံမှဆွတ်ခူးသောအသီးများပေါ် တည်မှီနေသည်။ သူတို့ဆေးရုံတက်နေစဉ် လိမ္မော်သီးများကို မည်သူဆွတ်ခူးပေးမည်နည်း။ ဒေသခံအသင်းတော်က ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ လိမ္မော်သီးများကိုဆွတ်ခူးပြီး ရောင်းချခဲ့ကြရာ ချို့တဲ့သောထိုဇနီးမောင်နှံအတွက် ဝင်ငွေရရှိစေသည့်ပြင် သူတို့ကိုလည်း စိတ်ငြိမ်သက်မှုဖြစ်စေ၏။
ကြင်နာသနားခြင်းကို တင်ပြနိုင်သည့်နည်းလမ်းများစွာ ရှိသည်။ ဥပမာ၊ တစ်ခါတစ်ရံ ဆင်းရဲဝေဒနာခံရသူများ အဓိကလိုအပ်ရာမှာ စာနာမှုဖြင့် နားထောင်ပေးမည့်၊ နားလည်မှုပြမည့်၊ ကျမ်းဆိုင်ရာနှစ်သိမ့်မှုပေးမည့်သူတို့ထံမှ ကြင်နာမှုပါသောလည်ပတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကြင်နာသနားတတ်သောခရစ်ယာန်များ သိကြသည်။—⁠ရောမ ၁၂:၁၅။
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိခရစ်ယာန်အသင်းတော်သည် ကြင်နာသနားခြင်းနှင့် ချစ်ခင်ကြင်နာစိတ်တို့တင်ပြသည့် အေးချမ်းငြိမ်သက်ရာနေရာဖြစ်သည်။ ရက်စက်ကြမ်းတမ်းမှုက တွန်းကန်နေစဉ် ကြင်နာသနားခြင်းက ဆွဲဆောင်စေသည်ကို ခရစ်ယာန်စစ်များ သိထားကြသည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့သည် ကောင်းကင်ခမည်းတော်ကို တုပဖို့ကြိုးစားသောအခါ လက်တွေ့ကျနည်းလမ်းများဖြင့် ‘ကြင်နာသနားခြင်းရှိကြ’ သည်။
ယေဟောဝါသက်သေများသည် သူတို့၏ခရစ်ယာန်အသိုင်းအဝိုင်းတွင် စိမ့်ဝင်ပျံ့နှံ့နေသော ကြင်နာသနားခြင်း၊ မေတ္တာ၊ အချင်းချင်းဂရုစိုက်သည့်ဝန်းကျင်ကို တွေ့ရှိခံစားရန် သင့်အားနွေးထွေးစွာ ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ နွေးထွေးပြီး နှစ်လို့ဖွယ်ကောင်းသောဝန်းကျင်ကို သင်မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ကြောင်း သူတို့လုံးဝယုံကြည်စိတ်ချသည်။—⁠ရောမ ၁၅:⁠၇။
[စာမျက်နှာ ၅ ပါ ရုပ်ပုံ]
ပေါလုသည် ကောလောသဲရှိခရစ်ယာန်များကို သနားစုံမက်ခြင်း ယူတင်ဝတ်ဆောင်ကြရန် အားပေးခဲ့သည်
[စာမျက်နှာ ၇ ပါ ရုပ်ပုံများ]
အကူအညီလိုအပ်ကြောင်း ယေရှုသိမြင်သောအခါ ကူညီနိုင်သည့်နည်းလမ်းကို ကြင်နာသနားစွာဖြင့် ကိုယ်တော်မြင်တွေ့တော်မူခဲ့
က၀၇ ၁၂/၁၅ စာ. ၄-၇